anyị na-ekwe nkwa
100% ogo ngwaahịa na Thailand. Anyị bụ onye nkesa nke HGH ngwaahịa na Thailand. Ngwaahịa anyị nwere ezigbo asambodo na ikikere. Anyị na-arụ ọrụ n'eziokwu na naanị ndị ọrụ nchịkwa, na-akwado 100% ogo ngwaahịa
Anyị na-ekwe nkwa ịnapụta ngwaahịa gị n'oge oge akọwapụtara site na nnyefe
Ihe nile nke hormone nke na-eto eto na-eziga anyị igbe dị mma, iji chebe ọgwụ ahụ
Anyị na-elekọta ndị ahịa anyị, anyị dị njikere iji nyefe ndụmọdụ n'efu na Monday - Saturday n'oge awa azụmahịa
Anyị na-ekwenye na nloghachi nke ngwongwo na ego site na ihe ndị a na-atụghị anya ya dị ka, idei mmiri ma ọ bụ oké ifufe, ọkụ ma ọ bụ ala ọma jijiji. Ije ozi nzi ozi na-ezighi ezi, a na-enyocha ngwongwo niile nchịkọta nọmba. Ị nwere ọrụ maka adreesị mbupu na-ezighị ezi na data nkeonwe gị